Makadii mese kwese kwese? Ndiri chizvarwa chemuZimbabwe uye ndichigara muno muZimbabwe. Ndiri munhu ane unyanzwi hwokutengesa uye nokutsvaga nzvimbo dzokutengesera. Ndinokwanisa kubatsira vanoda kupinda munezvekutenga uye nekutengesa.
Charles - Shamva, Zimbabwe
Say Hello Profile: https://www.say-hello.com/p/1235
Makadii mese kwese kwese?
Ndiri chizvarwa chemuZimbabwe uye ndichigara muno muZimbabwe.
Ndiri munhu ane unyanzwi hwokutengesa uye nokutsvaga nzvimbo dzokutengesera.
Ndinokwanisa kubatsira vanoda kupinda munezvekutenga uye nekutengesa.